पतिको लिं’ ग ला मो भन्दै सहन नसकी स’ म्बन्ध वि’ च्छेद – Sidha Post 24
पतिको लिं’ ग ला मो भन्दै सहन नसकी स’ म्बन्ध वि’ च्छेद
By admin On Mar 30, 2021
काठमाडौं । विश्वमा यस्ता घटना हुन्छन् जुन कल्पनाभन्दा बाहिरका । कतिपय घटना यथार्थ तर अ’पत्या’रिला पनि हुन्छन् कतिपय घटना सत्य रहन्छन् । यस्तै घटना नाइजेरियामा भएको छ । पहिलो विवाहको सम्बन्ध विच्छेद गरेर दोस्रो विवाह गरेकी एक महिलाले आफ्नो पतिसँग सम्बन्ध विच्छेद गरेकी छन् । सम्बन्ध विच्छेदको कारण श्रीमानको लिं’ग ला’ मो भएको र आफूलाई अ स ह्य पी’डा भएको उनको भनाइ छ ।**** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला????****
नाइजेरियास्थित जम्फारा राज्यको इस्लामिक अदालतले विवाहको एक हप्तापछि यस्तो मु’ द्धा दर्ता भएको जनाएको छ । ती महिलाले पहिलो विवाहको सम्बन्ध विच्छेदपछि आफ्नो रितिरिवाज अनुसार मैजिनरीसँग दोस्रो विवाह गरेकी थिइन् । श्रीमानको घर जानुभन्दा पहिला दुलाहाका आमाबुवालाई घर बोलाउने चलन छ ।**** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला????****
यही अवस्थामा उनीहरु पहिलो पटक सँगै बसेका थिए । त्यतिबेला पनि ती महिलाले अ’स’हज म’हसुश गरेको बताएकी थिइन् । उनले त्यो पी’ डा आफ्नो आमालाई समेत भनिन् तर, उनकी आमाले बिस्तारै ठिक हुँदै जाने भन्दै ती महिलालाई द’बा ब दिएकी थिइन् ।
आयशाका अनुसार उनीहरुले सहज ढंगले यौ’ नआ नन्द लि ने प्रयास पनि गरे तर अ स हज म हसुश भयो । यो घटना जम्फाराको हो । जम्फारा नाइजेरियाको राजधानीबाट ५०० मिटर दूरीमा पर्छ । नाइजेरियाको यो पहिलो राज्य हो जहाँ यो घटनामा स म्बन्ध वि च्छेदको मान्यता दियो । सामान्यतया पुरुषको लिं’ गको आकार ५.२ इन्च अर्थात् १३.१२ सेन्टिमिटर हुने गर्दछ ।
त्यस्तै , श्रीमान् श्रीमती भनेको एक रथका दुइ पांग्रा हुन् भनिन्छ । जीवनमा यी दुईको वीचमा मेल हुनु एकदम आवश्यक हुन्छ । सुमधुर सम्बन्धले मात्र जीवन सहज हुने गर्दछ । वैवाहिक सम्बन्धमा सानोतिनो झ’गडा वा म नमुटाव हुनु स्वाभाविक हो । अहिलेको भागदौड र व्यस्तताको कारणले गर्दा एकअर्कालाई समय दिनु गाह्रो हुँदा श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्धमा दरार आउने गर्छ । विवाहपूर्व प्रेम र खुशीले भरिएको जीन्दगी विवाहपछि एउटा कल्पनामा मात्रै सिमित हुन्छ ।
जब एक अर्काप्रति गु’ना’ सो हुन थाल्छ । आपसमा विचार नमिल्नु, एक अर्कालाई समय नदिनु, एकअर्काको इच्छाको ख्याल न गर्नु जस्ता स मस्या को कारण वैवाहिक सम्बन्धमा दरार पैदा हुन्छ । एक अध्ययनका अनुसार १० मा ६ विवाहित जोडी आफ्नो सम्बन्ध बचाउनको लागि बिशेषज्ञको सल्लाह लिने गर्छन् । म्यारिटल डिसप्युट रिसल्विङ एजेन्सीले वैवाहिक सम्बन्धमा आउने दरारको कारण पत्ता लगाउनको लागि गरेको सर्भेमा २ सय ४३ जनाले भाग लिएका थिए ।
इन्द्रेणीका छत्र शाही र कृष्णा बजगाई बि’चको गो’प्य कुरा थाहा पाएपछि काजलले यस्तो नि’र्णय गरिन (हेर्नुस् भिडियो
चीनमा बनेको क:ण्डम निकै सा:नो भएको म:न्त्रीको भनाइ